true solutions /zu-ZA/tools-for-life/solutions/steps/how-dangerous-is-the-environment.html 0 6 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/solutions_zu_ZA.jpg Izixazululo Zendawo Eyingozi
Uyemukelwa kwi-Online Course YeziXazululo Zendawo Eyingozi
Kulula ukuzizwa ukhathazekile ngesimo sezwe. Vula umabonakude, ufunde iphephandaba noma uye kunoma iyiphi isayithi lezindaba. Konke esikubonayo yinhlekelele: ukuzamazama komhlaba, izikhukhula, izimpi, izimbangi nobugebengu.
Kubukeka sengathi kuyenzeka yonke indawo—nakwamanye amazwe, izwe lethu uqobo kanye nasekhaya.
Kungasenza sizizwe siswele. Umhlaba, kubonakala sengathi, awubi yingozi nje kuphela, kepha uya ngokwanda njalo njalo, nsuku zonke.
Kepha kukhona okubalulekile okumele ukwazi ngakho konke lokhu. Imvelo empeleni ayiyona ingozi njengoba ibonakala iyingozi.
L. Ron Hubbard uthole ukuthi kunabantu abathile abanezinhloso zokwenza imvelo isongelwe ngokwenzeka. Futhi wanikeza izixazululo kunoma ngubani ongazisebenzisa ukunqoba ukwesaba kwabo futhi babhekane kangcono nemvelo yabo.
Kulesi sifundo, uzofunda izinyathelo ongazithatha ukunciphisa ukusongelwa ngokwemvelo. Uzofunda nokuthi ungabasiza kanjani abanye ukunqoba ukwesaba kwabo ukuze bakwazi ukuphatha imvelo yabo ngempumelelo. Imininingwane esesifundweni ingaletha ithonya elikhulu lokuthula futhi iholele ezimpilweni ezijabulisayo neziyimpumelelo kakhudlwana.
Kungani imvelo yakho ingadala ukuthi uzizwe uphazamisekile, ungenalusizo futhi ukhungathekile.
Ungasiza kanjani ukunciphisa usongo olubonakalayo lomhlaba okuzungezile.
Amathuluzi azokusiza ukukhulisa ukuzethemba kwakho kanye ikhono ukulawula imvelo yakho.
1. Iyingozi Kangakanani Imvelo?
1.‏1 FUNDA: Iyingozi Kangakanani Imvelo?
2. Ama-Merchants of Chaos
2.‏1 FUNDA: Ama-Merchants of Chaos
3. Izindlela Zokunciphisa Usongo
3.‏1 FUNDA: Izindlela Zokunciphisa Usongo
4. Ukwazi Ukubhekana Nakho
4.‏1 FUNDA: Ukwazi Ukubhekana Nakho
5. Umhlaba Wangempela
5.‏1 FUNDA: Umhlaba Wangempela
6. Izivivinyo Ezisebenzayo
6.‏1 Qaphela Indawo Yakho
6.‏2 Thatha Uhambo
6.‏3 Izindlela Zokunciphisa Usongo
6.‏4 Siza Othile Abhekane